IMISA AYAAD KU KAYDIN KARTAA BARADHADA QOYAN EE BIYAHA KU JIRA QABOOJIYAHA, SHURUUDAHA AAD U BAAHAN TAHAY SI AAD TAN U SAMEYSO, SIYAABO AAD U SII DHEERAATO NOLOSHA SHELF - WIXII MARTIDA
Tilmaamayaasha guriga ayaa guriga kuugu jira inta aad ku kaydin karto baradhada diirka ee biyaha ku jira qaboojiyaha
Mararka qaarkood martigelintu waxay leedahay baahida loo qabo pre-diirka baradho, iyo ma 1-2 qaybood. Gaar ahaan marka ay timaado diyaarinta fasaxa, kaas oo booqan doona marti badan.
Marka kaydinta baradhada, waxaad u baahan tahay inaad xasuusnaato in khudradda cagaaran ay aad u dhaqso badan tahay, waxay ku daboolaysaa qolof qallalan oo lumisa dhadhanka marka ay wax ka qabato oksijiinka. Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo dheereynayo "nolosha" xididkan.
Laakiin sida loo ilaaliyo si aanay u madoobayn oo lumiyaan dhadhanka? Suurtagal ma tahay in biyaha lagu hayo? Jawaabyo dheeraad ah.
Maxay tahay baradho diiri si dhakhso ah u gudubtay hawada?
Baradhada cagaaran waxay bilaabaan inay madow noqdaan marka ay ku jiraan hawada ka dib waqti cayiman.. Tani waxay sabab u tahay arrimaha soo socda:
Digriiga qumbaha waxaa ku jira sonkorta (qiyaastii 0.9%). Isdhexgalka asiidhyada amino, waa la burburiyey, taas oo sabab u ah sifooyinka organoleptic ee khudaarta isbadalaya: dhadhanka, midabka iyo urta. Sida laga soo xigtay, hoos u dhigo sonkorta ee baradho, sii dheer digriiga waxaa la keydin doonaa.
Sidoo kale waa mid hodan ku ah unugyada birta: birta, potassium, kalsiyum, sodium, magnesium, iwm. Marka la dhexgalo ogsijiinta, way oksidiin, baradkuna wuxuu bilaabmaa madow.
DIIWAAN: Baradhada cagaaran ee lagu iibsado dukaanka oo koraya miisaaniyad warshad ku jirta Bacriminta yaryar ee yaryar si ay u helaan mugdi. Baradho guri laga soo bilaabo fasax xagaaga ayaa laga yaabaa inaanay madaweynin hawada ilaa 2 saacadood.
Si hoos loogu dhigo mugdiga khudaarta cagaaran, waxaa jira dhowr habab oo la xaqiijiyay oo lagu dabaqi karo jikada caadiga ah.
Kaydinta heerkulka qolka
Inta badan Habka caadiga ah ee barafka diirka laga dhaliyo madow waa in la dhigo dheriga biyo qabow.. Tani waxay ilaalin doontaa dhadhanka qudaarta iyo muuqaalka cusub.
Waxaa habboon in la ogaado in fitamiinada iyo walxaha raadraaca ee baradhadu ay hodan yihiin, si tartiib ah u milmaan biyo. Si taas looga hortago, digriiga waa in lagu keydiyaa biyaha, gebi ahaanna la gooyaa intaan la karin.
Baradhada dalka ee xaaladaha noocaas ah waxaa lagu kaydin karaa 3-4 saacadood, iyo dukaanka, illaa 2-3 saacadood. Joogitaanka bataatiga la nadiifiyey ee biyaha heerkulka qolka dheer ee wakhtiyadaas waxay keeni doontaa in lumiyo dhamaan sifooyinka wanaagsan ee badeecada.
Ku buuxi dheriga biyo qabow.
Nadiifi oo si fiican u biyo raaci digriiga.
Ku rid khudaarta biyaha si ay ugu daboolaan dhammaantood.
Ku dabool daboolka daboolka.
Diyaarinta baradhada diirran ee biyo qabow waxay kaa caawineysaa kordhinta waqtiga kaydinta. Intee in le'eg ayaad ku hayn kartaa baradhada diirran ee qaboojiyaha? Marka heerkulku hooseeyo, ma waayi doono tayadiisa mudo ah 24 saacadood.. Nolosha khafiifka ah ee baradhada dheer ee habkan ayaa ka dhigi doonta biyo badan oo ku dhawaad ​​dhadhan.
Ku shub haan kasta oo qoto dheer oo biyo qabow.
Ku dhaq miro diirran.
Ku rid digriiga biyaha.
Ku rid suxuunta qaboojiyaha.
Ka hor inta aan la karinin khudradda waa in mar labaad lagu maydhaa wabiga qabow.
Waxaad ka baran kartaa wax badan oo ku saabsan kaydinta baradhada qoyan, iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kaydinta baradhada cayriin, la kariyey iyo baradho leh ee qaboojiyaha ayaa halkan laga heli karaa.
Miyuu suurtagal yahay in la qaboojiyo?
Habka ugu dheer uguna haboon ee lagu ilaalinayo digriiga aan lahayn baradho waa in la qaboojiyo heerkulka ilaa -18 ° C.
Tan waxaa loo samayn karaa siyaabo badan. Xaaladaha saxda ah, nolol shafka wuxuu noqon karaa dhowr bilood.. Laakiin xasuuso in baradho la diiriyay aan dib loo dhigin.
Si loo barafoobo baradho oo dhan, waxaa fiican in la qaato digriiga yaryar. Laakiin barandhadh aad u ballaaran ka hor inta aan la barafeynin si fudud ayaa loo gooyaa kala badh.
Cadayna jooji barandhada.
Ku qalaji midhaha leh shukumaan jikada.
Ku duub bac caag ah ama ku duub baal balaastig ah.
Ku rid qaboojiyaha, waaxda khudradda.
Si aad u diyaarsato badeecad saafi ah, waxaad u baahan tahay inaad sameyso waxyaabaha soo socda:
Ku dhaq biyo qabow.
Si fiican u qalaji shukumaan.
Iska yaree digriiga ku xayawaanka ama xaleefyada.
Salt alaabta si aad uga fogaato dufan marka la qaboojiyey.
U diyaarso baradhada ku jirta saxaro 1 lakab oo dabool leh foorno.
Ku rid weelka baradhada barafeeyaha.
Waa muhiim! Baradhada ka hor inta aan la karinin waa wax aan macquul ahayn. Ka soo qabso qaboojiyaha, isla markiiba ku kari.
Waxaa jira dhawr fursadood oo lagu kaydinayo baradho, kaas oo laga heli karo faahfaahin dheeraad ah qodobbada soo socda:
In dukaanka khudradda;
Sida loo kordhiyo nolosha shelf ee khudaarta cagaaran?
Hooyooyinka khibradda leh waxay og yihiin in ay jiraan siyaabo sahlan oo loo kordhiyo xilliga kaydinta ee baradhada diiray.:
Biyaha ku jira digriiga diirran, waxaad ku dari kartaa jeex ah liin ama citric acid at caarada mindi.
Xakamaynta qoto-dheer ee heerkulka ilaa -30 ° C waxay ka dhigaysaa nolosha shelf ee baradho ku dhowaad aan xad lahayn.
Digriiga xayawaanka ka hor inta aan la qaboojin waxaa kale oo uu ka caawiyaa inuu kaydiyo khudaarta dhowr bilood.
Dhab ahaantii, dad badan ayaa ku soo dhacay xaalad ay muhiim u tahay in la nadiifiyo qadar badan oo baradho ah, sababtoo ah shaqo ka dibna maaha waqti ku filan oo la sameeyo ka hor inta aan la karin. Xaaladdan oo kale, hababka kor ku xusan ee kaydinta baradhada aan lahayn diirka ayaa noqon doona mid waxtar leh.